Redmi Buds 3 Pro, anyị na-enyocha ekweisi ị na-achọ | Gam akporosis
Redmi Buds 3 Pro, nyocha, ọnụahịa na echiche
Ọzọkwa anyị ga-ewetara gị wireless ekweisi nyochaa. Mana oge a anyị anaghị eche ihu ọ bụla, taa anyị nwere nyocha nke ihe atụ ndị Mi-Fid na-atụ anya ya. Anyị enweela ike ịnwale ndị ọhụrụ ụbọchị ole na ole Redmi Buds 3 Pro na anyị na-agwa gị ihe niile gbasara ha.
Maka ndị maara Xiaomi nke ọma, akụrụngwa ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ ahụ nwere atụmanya dị elu na mma na ọnụahịa. Na ndị na-enwetụbeghị ohere ịnwe ngwaọrụ mbinye aka, Buds 3 Pro bụ ohere magburu onwe ya ịme ya.
1 Buds 3 Pro, ha abụghị naanị ụdị ọzọ
2 Ịkpọghe igbe Redmi Buds 3 Pro
3 Buds 3 Pro imewe
3.1 Ebubo Buds 3 Pro
4 Teknụzụ niile ị tụrụ anya ya
5 Nka na ụzụ
Buds 3 Pro, ha abụghị naanị ụdị ọzọ
Dị ka ị maara, na Androidsis enwere ọtụtụ ekweisi na anyị nwere ihu ọma ịnwale. Onye ọ bụla nwere ezigbo ihe, anyị na-ahụkwa ụfọdụ ihe kpatara na ha nwere ike ịba uru. Kacha mbụ, nke kacha nwee uche, kacha acha ma ọ bụ ọbụlagodi dị ọnụ ala. Na Redmi Buds 3 Pro, ya ọtụtụ ihe ị ga - achọta iji bụrụ ihe ị ga - enweta ọzọ.
Buru onye mbu nweta Buds 3 Pro na Kupọns ego
Mgbe ụfọdụ o yiri ka, hụrụ otu ụdị nke ekweisi, hụrụ ha niile. Ọ na-esikwa ike inweta isi ihe dị iche na ndị ọzọ gafere agba ma ọ bụ ọdịdị. Redmi Buds 3 Pro jisiri ike pụọ na ndị ọzọ na imewe ekele maka iji ihe eji eme ihe n'uzo di iche.
N'ezie, ihe mbu nke putara ihe banyere nhazi ya bu akụkụ tactile nke fọdụrụ nke ntị. Emepụtara na a kenkowaputa, translucent plastic na yiri iko ma nke ahụ nyere ngwaọrụ a ezigbo adịchaghị mma. Obi abụọ adịghị ya, ha si na nhọrọ ndị ọzọ pụọ ịnwe a dị iche iche image ka niile ndị anyị na-enwe ike na-agbalị.
Ịkpọghe igbe Redmi Buds 3 Pro
Oge eruola ileba n’ime igbe ekweisi ndị a na-eche ogologo oge. Anyị enweghị ike ịhapụ ohere ikwupụta banyere nkwakọ ngwaahịa Mi, dị ka mgbe niile Mara ihe dị iche na amaka na ogo na arụmọrụ. Obere ịgwa gị, maka mgbanwe, anyị na-ahụ ihe niile anyị nwere ike inwe olile anya. Ma ọ bụrụ na ịchọghị ichere ọzọ, nye iwu Buds 3 Pro ugbu a na ọnụahịa kacha mma na Aliexpress.
La ikpe ebubo, nke anyị bụ n'ezie ezigbo mma agba ntụ agba. N'ime ya bụ ekweisi onwe ha. Na mgbakwunye, anyị nwere isi ojiji akwụkwọ na akwụkwọ ikike ngwaahịa. N'ikpeazụ, chaja nja, nke oge a nwere usoro USB Cdị C, na atọ mmezi nke pad nke nha ozo.
Buds 3 Pro imewe
A priori, tupu ị nwee ike ịnwale ha, nhazi nke Buds 3 Pro na-achịkwa iji dọta uche. Ha na-eme ya n'ihi ọdịdị mbụ ha na-egosi na eji translucent na-egbu maramara "iko" maka mpaghara mmetụ nke ekweisi. Obi abụọ adịghị ya ihe ịga nke ọma nke ahụ na-eme ka ha maa mma na njedebe ya na-eme ka ha bụrụ ndị ahịa nke ahịa.
Ihe ohuru Buds 3 Pro nwere a in-ntị usoro "Na ntị", ha na-ejikwa mpempe akwụkwọ ndị a ma ama na-akpali echiche dịgasị iche iche. Ha nwere obere obere, ma tinye ya naanị ha na-ekpughe akụkụ ebe njikwa njikwa aka. Ahụmịhe onye ọrụ ga-akawanye mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha na "gummies" zuru ezu nke kachasị mma na ahụ anyị, ihe dịkwa ga-eme ka njide siri ike.
Anyị nwere 35 mAh na-ebugharị ikike na ntị ọ bụla nke na-enye anyị ohere ịnwe nnwere onwe nke ruo awa isii nke playback na-aga. Nke a na-adabere na ọkwa olu anyị na-eji yana ma anyị anaghị akwụsị mkpọtụ na-arụ ọrụ. Ihe niile ị na-achọ na ekweisi, zụta Buds 3 Pro gị na Kupọns ego.
Ebubo Buds 3 Pro
Ọ bụrụ n ’ịlele okwu ịgba ụgwọ, a gwụchara ya na plastik na - egbu maramara nke nwere ezigbo mma. Nha dị mma iji buru ha n'akpa ebe obula. O nwere mkpuchi magnetik ka o wee mechie mgbe niile ma ibu ya dị irè. Na ihu anyị na-ahụ bọtịnụ maka mmekọrịta anyị ama na anyị ga-eji otu ugboro.
Anyị ga-ekwu na e nyere ọdịdị elongated nke ikpe na-ebu ikpe, nakwa na etinyere ekweisi site n'elu na ikpe ahụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Nke a pụtara na n’oge izizi anyị amachaghị ebe nke ọbụla na-aga. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe anyị ga-achịkwa n'oge na-adịghị anya.
Na ala anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri, nke dị ka a tụrụ anya, rutere na Typedị USB Type-C. Ọ nwere 470 mAh na-ebu ikike na anyị nwere ike ịnwe 100% nke ụgwọ gị naanị n'ime awa 2 na ọkara.
Teknụzụ niile ị tụrụ anya ya
A ga-atụ anya na ekweisi Redmi Buds 3 Pro ọhụrụ ga-enwe Teknụzụ kachasị ọhụrụ, ya mere, ọ bụ na ị gaghị atụ uche ihe ọ bụla. Anyị chọtara teknụzụ Bluetooth 5.2 àjà a super anụ njikọ ruo 10 mita pụọ. Na mgbakwunye, ọ ga-enye anyị ohere jikọọ ekweisi na ngwaọrụ abụọ n'otu oge. Ọ bụrụ na i kwenye nweta ụfọdụ Buds 3 Pro ewepu ego na Aliexpress.
Ọ pụta ìhè na nkà na ụzụ nke ịkagbu mkpọtụ mkpọtụ. Anyị na-achọta ụzọ atọ dị iche iche site na nke ịhọrọ. Ma ekweisi onwe ha ike ịchọpụta ụda mkpọtụ itinye ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ha na-enweta belata ruo 35 dB nke ụda ihere. Ekele diri igwe okwu atọ na a Unique algọridim wezuga na-aza ụda mkpọtụ.
Ọzọ nke na-eme nke ọma na nke ahụ dị mkpa n'ihi na ọtụtụ "gamers" bụ na Buds 3 Pro nwere ọnọdụ "egwuregwu". Rụọ ọrụ ya anyị na-enweta belata latency ruo 69 milliseconds. Gaghị echefu otu egwuregwu kachasị amasị gị na ekwentị gị, pc, ma ọ bụ mbadamba gị. Na ha na MIUI na-adi nma ekele na mkpakọrịta ngwa ngwa na Pop-elu.
N'ikpeazụ, ihe anyị na-enweghị ike izere ile anya bụ nnwere onwe. Site na Buds 3 Pro anyi nwere ike ige egwu ruo awa 28 na-enweghị mkpa njikọ njikọ. Ihe ụgwọ batrị zuru ezu na-enye anyị ruo awa 6 na-enweghị nkwụsị playback egwu ma ọ bụ usoro kachasị amasị gị.
Nlereanya Buds 3 Pro
Nhazi Na ntị
Anya Ihe ruru mita iri abụọ
Smart ANC Atọ ụdịdị dị
Onwe ya Awa 28
Isi igwe batrị 35 mAh
Battery ikpe 470 mAh
Ekweisi Nchaji oge Oge 1
Nchaji oge ikpe Awa 2.5
Ngwa ngwa ngwa 3 awa ojiji na 10 nkeji
Dị ibu USB Cdị C
Ikuku na-akwụ ụgwọ Ee - Qi
Ibu ekweisi 4.9 g
Ileba ibu 55 g
Linkzụta njikọ Buds 3 Pro
Imebe mbụ na adịchaghị anya
Njikọ Bluetooth 5.2
Ikuku na-akwụ ụgwọ dakọtara Qi
Nzube na ọdịdị
Ikuku na-akwụ ụgwọ
Obere kensinammuo na esi etinye ha na ikpe
Na-ntị usoro na "ndị gummies"
Dabara na ikpe
Na ntị usoro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Redmi Buds 3 Pro, nyocha, ọnụahịa na echiche
Egwuregwu egwuregwu isii kacha mma maka gam akporo